CNC inkonzo yokugaya - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ukukhokela ngokuQiniseka kweNkonzo ye-CNC yokuSila-i-OEM / i-ODM ye-China ye-CNC yokugaya / yokuNyusa iiNxalenye zomvelisi
Ngaba ufuna ethembekileyo CNC Millingiqabane kunye nomgangatho nanto? I-Ouzhan Trade (i-Shanghai) Co., Ltd.yinkampani ye-China CNC enobuchule kunye namava ebonelela ngokuchanekileyoIinkonzo zokugaya i-CNC ngoomatshini abaphambili kubandakanya CNC yokugayaamaziko ukusuka kwi-3 axis ukuya kwi-axis ezi-5 kunye neenjineli ezinesakhono.Oku kufezekisa abaqhubi abagqwesileyo kwi-CAD (uyilo oluncediswa yikhompyuter) kunye neCAM (iinkqubo zokwenza ikhompyutha). Bahlala bekwazi ukufumana eyona ndlela yokuvelisa olona mgangatho uphezuluIcandelo le-CNC lokusila kunye namacandelo kubathengi.
Ngobuchule obomeleleyo kunye neminyaka yamava atyebileyo, sinokubonelela ngakwisikhundla esiphezulu kodwa sinexabiso eliphantsi Iinkonzo zokugaya i-CNC kubandakanya i-3-axis CNC yokugaya amaziko ukuya kwi-5-axis CNC yokugaya amaziko e-high speed CNC yokuvelisa, ukukhawuleza ngokukhawuleza, kunye nokuchaneka CNC yokugayaUkujika. Umgangatho ophezulu weemveliso zethu zokugaya ezikhawulezayo ze-CNC ziyabandakanyeka kwicandelo leshishini lokuzenzekelayo, i-aerogenerator, iinxalenye zemoto, ukuguqa koomatshini, izixhobo zonyango, izixhobo zelebhu, iindawo zokukhanyisa izixhobo, njl.
I-Ouzhan Precision CNC yokugaya amandla kunye neempawu:
-Iminyaka eli-15 yamava kunye nokwazi njani kwi Iinkonzo machining CNC, I-Ouzhan ikakhulu ibonelela nge-OEM / i-ODM Inkonzo yokugaya i-CNC kunye neemveliso ezinxulumene noko kubandakanya ukugaya ngokuchanekileyo, ukugaya isinyithi, iplastikhi ye-mlling, njl.
-Nkxaso ephantsi, ephakathi ukuya kwimveliso yevolumu ephezulu.
Ukuprosesa okukhawulezayo kunye nokusetyenziswa kokugqibela.
-Ukuchaneka okuphezulu, ukuvelisa ngesantya esiphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu.
Uluhlu olubanzi lwesinyithi kunye nezinto zeplastiki.
-Ukugqitywa okufunekayo kunye nokunyamezelana okuqinileyo kuyafumaneka.
-Iiseti ezingaphezulu kwama-20 zokuqhubela phambili CNC yokugaya Oomatshini e-Ouzhan.
Kutheni Khetha Ouzhan CNC Milling Services
Izixhobo zethu zokuvelisa ezingundoqo zingeniswa zivela eSwitzerland naseJapan, ezinokubonelela abathengi ngokuchaneka okuphezulu (± 0.01mm) kunye nexabiso eliphantsi CNC yokugaya amaxabiso.
2.Multiple CNC izakhono zokuvelisa
Ukongeza wokugaya, siya ngokukodwa ekujikeni, lathing, ukubhola, Iinkonzo zokuguqula kunye ne-CNC, ukuze ufumane ukhetho olukhulu lwe Iindawo ngomshini CNC kwiqela lethu elithembekileyo.
Sinabasebenzi abahlola umgangatho wobuchule kunye nezixhobo, ngokwemigangatho yamazwe onke kwiimveliso zakho zokuvavanya, kwaye ukhuphe ingxelo yovavanyo eneenkcukacha kubathengi ' Iindawo machining CNC.
Ubungakanani ngentando kunye neemilo ziyafumaneka. Wamkelekile ekwabelaneni ngemizobo yakho ye-2D okanye ye-3D Iindawo machining CNC nathi, masisebenze kunye ukwenza ubomi bube nokuyila ngakumbi.
Yintoni CNC Milling Service & Indlela CNC Milling Works
CNC yokugaya yinkqubo yokuvelisa ethabathayo ekhupha ngokukhawuleza izinto ezivela kwinyithi okanye iibhloko zeplastiki ukuvelisa iindawo ezichanekileyo ezinokunyamezelana okuqinileyo.
CNC Millingilunge kakhulu njengenkqubo yesibini okanye yokugqibezela into esele yenziwe ngomatshini, ukubonelela ngengcaciso kuyo okanye ukuvelisa amanqaku enxalenye, anjengemingxunya, imingxunya kunye nemisonto. Nangona kunjalo, le nkqubo ikwasetyenziselwa ukubumba isitokhwe semathiriyeli ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Kuzo zombini ezi meko, inkqubo yokugaya isusa izinto ukwenza imilo oyifunayo kunye nenxalenye yenxalenye. Okokuqala, isixhobo sinqunqa amaqhekeza amancinci-okt, iichips-off kwindawo yokusebenza ukuze enze ubume kunye nefom. Emva koko, lo msebenzi usebenza inkqubo yokugaya ngokuchaneka okuphezulu kakhulu nangokuchaneka ngakumbi ukugqiba inxenye ngeempawu zayo kunye neenkcukacha. Ngokwesiqhelo, indawo egqityiweyo ifuna ukupasa okuchwetheza ukuze kufezekiswe ukuchaneka okufunekayo kunye nokunyamezelana. Ukufumana iindawo ezintsonkothileyo zejometri, ukuseta umatshini okuninzi kunokufuneka ukugqiba inkqubo yokuyila.
Izixhobo zokugaya i-CNC -Izinto ezisetyenziselwa ukuGaya i-CNC
Izinto ezikhoyo for CNC Milling
ICopper C101 ICopper C101
Izicelo Iinkonzo Milling CNC kunye Izahlulo
Nalu ukhetho olubanzi lweenkonzo zokugqiba umphezulu wesinyithi ekukhetheni kwakho iindawo ze-CNC zokugaya izixhobo ukuphucula ukubonakala kwamalungu, ukuguda komphezulu, ukumelana nokubola, kunye nezinye izinto: